Daawo Muuqaal: Shirka Madasha Qaran oo Furmay iyo Hogaamiyayaasha oo isku fahmi la’ in …. – Kismaayo24 News Agency
Daawo Muuqaal: Shirka Madasha Qaran oo Furmay iyo Hogaamiyayaasha oo isku fahmi la’ in ….
by Tifaftiraha K24 3rd August 2016 3rd August 2016 042
Wasiiru dowlaha madaxtooyada Soomaaliya mudane Mahad Maxamed Salaad oo lahadlay warbaahinta ayaa sheegay in qodobada muhiimka ah ee shirka looga hadlayo ay qeyb ka yihiin warbixin laga sugayo guddiga qilaafaadka oo ku saabsan qilaafaadka ka dhalan kara doorashooyinka.
Waxaa mudane Mahad Maxamed Salaad wasiiru dowlaha madaxtooyada uu sheegay in gaba gabada shirka lagu soo gudbin doono xiliga rasmiga ah ee doorashada la qaban doono iyo xiliga ay dhamaan doonto, iyo sidoo kale qodobada wali dhiman eek u aadan doorashooyinka 2016-ka.
Top News: Madaxweyne Obama Oo Weerar Dhinac Walba Ah Ku Qaadey Trump, Isagoona…………………
War Hada” Diyaarad Rakaab ah oo Goordhaw uu dab ku qabsaday Garoonka Diyaaradaha Caalamiga ee….
Amisom oo ka Hadashay Xasuuq ay ka Geeysatay…